KoDana Satemana Sanet
more about "KoDana Satemana Sanet", posted with vodpod
Posted by dream at 01:22 No comments:
Posted by dream at 01:21 No comments:
more about "Botataung Pagoda", posted with vodpod
Posted by dream at 01:19 No comments:
Folder တွေကို Lock ချပေးနိုင်တဲ့ Software များ
ဒီထဲမှာ ပို့နည်းနေသေးတော့ အသစ်တစ်ခု ထပ်ယူလိုက်တာပါ..။ ကိုစေတန်ရဲ့ ဟိုဟိုဒီဒီ ပို့ထဲမှာရေးဖို့ကျတော့လည်း ဒါက အပြင်က Software တစ်ခုဖြစ်နေပြန်တယ်..။ XP က Function ကို ယူသုံးတာမှမဟုတ်ပဲ..။
ကျွန်တော်ညွှန်းချင်တာကတော့ DirLock ဆိုတဲ့ဟာပါ..။ Google ထဲမှာရှာသည်ဖြစ်စေ..။
ဒီမှာ http://www.softpedia.com/get/Securit.../dirLock.shtml ဖြစ်စေ ဒေါင်းလော့ လုပ်နိုင်ပါတယ်..။
ကဲ တစ်ခြား Software တွေလည်း ကျန်ပါသေးတယ်.. ၀င်ဆွေးနွေးပေးကြပါဦး..။ အားနည်းချက် အားသာချက်တွေကိုပေါ့...
အခု Dirlock နဲ့ lock ချထားလိုက်ပြီဆိုရင် ဖွင့်လိုက်ရင် Access denied ဆိုပြီး ခပ်တည်တည်နဲ့ Window ကခွင့်မပြုသလိုလို လုပ်ပါတယ်..။ မသိသာဘူးပေါ့...။ Software သုံးထားမှန်း...။
အဲဒါပေမဲ့ တစ်ခြား Account တစ်ခုကနေ ကြည့်ပြန်ရင် ရနေပြန်ပါရော..။ ကိုယ့် user account ဖက်မှာသာ lock ချထားပေးနိုင်တာပါပဲ...။
ဒါလေးအရမ်းကောင်းတယ် နော်..flash drives တွေကိုပါ password ပေးလို့ရတယ်။ file နဲ့ folder တွေကို password ပေးလိုက်တာနဲ့ ပျောက်သွားရော.. ဘယ် မှာမှ ရှာမရဘူး С ကလွဲရင်ပေါ့ ။သူ့ software ပါ သူပြန်ဖျောက်လို့ရတယ်။ဒါတော့မလုပ်တတ်သေးဘူး။
My Computer -> Right click မှာ ကိုယ့် LOGO လေးပေါ်တဲ့နည်း...
XP မှာ လူသုံးနည်းပြီး သုံးလို့ကောင်းတဲ့ နည်းလေးတွေ ပြော၇အောင်ဗျာ..
OEM Logo ထည့်လို့ရအောင်ပါ... ကိုယ့်ရဲ့ My Computer properties မှာ... ပုံလေးထည့်လို့ရတဲ့ နည်းပါ..
အဲဒီမှာပါတဲ့ ပုံလေးနဲ့ စာကို ပြင်ပြီး C:\_Windows\_System32 အောက်မှာ ထည့်လိုက်ပါ... ပုံကတော့ BMP ဖြစ်ရမယ်နော်.. size ကတော့ 180 X 114 မှ သင့်တော်မှာပါ.
အဲဒါလေးကို desktop.ini နဲ့သိမ်းလိုက်ပါ.. C: သို့မဟုတ် D: အောက်မှာပေါ့..
iconarea_image ကတော့ ပုံလမ်းကြောင်းပါ..
desktop.ini နဲ့ ပုံက Folder တစ်ခုထဲမှာ ရှိမယ်ဆိုရင် ပတ်လမ်းကြောင်းကို မရေးပဲ ပုံနာမည် တိုက်ရိုက်ရေးလို့ရပါတယ်..
iconarea_text အဲဒါကတော့ စာသားအရောင်ပေါ့... 0x00 R G B ပါ... 00 ကနေ FF ထိရှိပါတယ်.. 0x00FF0000 ဆိုရင် စာက အနီရောင်ပေါ့..
recircle bin ကနေ empty လုပ်ပြီးသားဖိုင်ကိုပြန်လိုချင်ရင်ရပါသလားဆိုတာသိချင်ပါတယ်... ကျွန်တော်မှားဖျက်ပြီးတော့မှလက်လွန်သွားလို့ပါဗျာ
free file hosting ၀က်ဆိုက်လေးတွေ
်file sharing လုပ်ဖို့ ဆိုက်လေးတွေပါ . .
အားလုံး Free ပေးထားပါတယ် . . Register လုပ်ပြီးသုံးရင်ပိုကောင်းတဲ့ဆိုက်တွေလည်းရှိပါတ ယ် .
လူကြိုက်အများဆုံး အဆင့်အလိုက် ဖော်ပြထားပေးပါတယ် . . တစ်ကြိမ်မှာ အများဆုံး upload လုပ်နိုင်တဲ့ ပမာဏလေးတွေကိုဘေးမှာရေးပေးထားပါတယ် . .ကောင်းကောင်းကြီး အသုံးချ နိုင်ကြပါစေဗျာ . .
Unregister user upload size (MB) Register user upload size (MB) Space allow
http://www.bestsharing.com/ all unlimited
http://www.upload2.net/ 25 -host 1 year, can use DLMs
နောက်ထပ်လည်းအများကြီး (18 Sites) ကျန်သေးတယ်ဗျာ . . .
ဒီကနေသွားလို့ရပါတယ် . .
င်္တခြားကောင်းတာလေးတွေရှိရင်လည်း ပြောကြပါဗျို့ . .
Please type this password "hacked". If you get it, your computer is infected by Flashy virus.
Posted by dream at 01:45 No comments:
Other Myanmar Links
Posted by dream at 01:18 No comments:
The terms wallpaper and desktop picture refer to an image used asabackground onacomputer screen, usually for the desktop ofagraphical user interface
Posted by dream at 23:44 No comments:
Myanmar Magazine Books
Paw Phu Hlwar
Corbis Find Esay
Htun Aein Drabo
Nature Photo sites
Myanmar Computer Website